December | 2017 | klinikseo20
December 20, 2017 klinikseo20
Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Hondo yeNyika yeFIFA ya2018 ichava Cup 21 yenyika yeFIFA, chikwata chemaodzanyemba checadrennial chamarudzi ose chakakwikwidzana nemapoka emarudzi evanhu vesangano renhengo dzeFIFA. Inorongwa kuti iitwe muRussia kubva musi wa14 Kubvumbi kusvika kuJuly 15, 2018, mushure mokunge nyika yacho yakapiwa kodzero yekugamuchira musi waDecember 2, 2010. Iyi ndiyo ichava yekutanga yeNdebe yeNyika yakaitwa muEurope kubva muna 2006; zvose kunze kweimwe yemitambo nzvimbo dziri muEuropea Russia, kumadokero kweUral Mountains kuitira kuti nguva yekufamba ishandiswe. Mutambo wokupedzisira uchabatana nemakwikwi makumi maviri emarudzi, anosanganisira makira makumi matatu nematanhatu akagadziriswa kuburikidza nemakwikwi akakodzera uye anowanzogadzirira vatambi vechikwata. Pakati pemakwikwi makumi maviri nemasere, makumi maviri achave achiita zvekudzoka shure kwekutsvaga shure mushure mekupedzisira kwemutambo muna 2014, kusanganisira kudzivirira mauto eJalimane, neBrazil ndiro boka rega rokutora muzvinyorwa zvose, apo Iceland nePanama zvese zvichaita kuonekwa kwekutanga paNdebe yeNyika yeFIFA. Zvose makumi matanhatu nematanhatu zvichamhanya munzvimbo 12 dziri mumaguta gumi nemaviri. Yokupedzisira ichaitika musi wa15 Mbudzi muMoscow kuLuzhniki Stadium. Vanokunda veWorld Cup vachakwanisa kubhadharira 2021 FIFA Confederations Cup. Perihal Piala Dunia 2018
Perihal Piala Dunia 2018 Nzira yekupa mvumo yekugamuchira iyo 2018 uye 2022 FIFA yeNyika Cupo yakatanga munaJanuary 2009, uye sangano renyika raive kusvika 2 February 2009 kubvisa zvido zvavo. Pakutanga, nyika mapfumbamwe dzakapa mabhizimusi muNdebe yeNyika yeFIFA ya2018, asi Mexico yakazotevera kubva payaiti, uye chikwata cheIndonesia chakarambwa neFIFA munaFebruary 2010 mushure mekunge hurumende yeIndonesia yakundikana kuisa tsamba yekutsigira chikwata. Munguva yebato rekutsvaga, nyika nhatu dzisara dzisiri UEFA (Australia, Japan, neUnited States) zvishoma nezvishoma dzakasimuka kubva muna 2018 bids, uye nyika dzeEFA dzakave dzakatongerwa kunze kwechikwata cha2022. Sezvo zvakadaro, pakanga pane pakupedzisira zvikwata zvitsva zveNyika yeFIFA yeFIFA 2018: England, Russia, Netherlands / Belgium, uye Portugal / Spain. Vechi makumi maviri nemaviri nhengo yeFIFA Executive Committee vakaungana muZurich musi waDecember 2, 2010 kuvhota kuti vasarudze mauto ematambo ose maviri. Russia yakakunda kodzero yekuva 2018 muvakidzani mumutsara wepiri wekuvhota. Nyika yePortugal / Spain yakasvika yechipiri, uye iyo kubva kuBelgium / Netherlands kune yechitatu. Chikwata cheEngland kugamuchira mutambo waro wechipiri chakawira pakutanga kukanganisa. Perihal Piala Dunia 2018